Tena zava-nitranga. Mba hahazatra ny amin'ny tsara tarehy ny vehivavy, jereo ny fanontaniana miaraka amin'ny ankizivavy
Mba hihaona fa, izay no mba hifandray anao, ianao no tokony hihaino tsara ny mombamomba azy. Tandremo ny sary toetra, raha toa ka tsara sy tsara tarehy, dia izy no tia ny tenany, mikarakara ny tenany. Saingy izany dia midika ihany koa dia mila mahafeno ireo fepetra ireo. Ao amin’ny sary angamba tsy voatery, fa raha miresaka ny tovovavy dia tandremo izany. Saingy tsy midika izany fa ianao mila mifidy ny ugliest.
Mifidy fotsiny ny zavatra eo anelanelany. Ny sary dia inona ny ankizivavy mijery eo amin’ny toerana voalohany. Izany dia tsara kokoa ny mampiasa ny tena ny sary ny olo-malaza sy ny sary avy ny Aterineto dia afaka mba mahalasa adala, ary raha tsy ampiasaina toy izany koa ny sary.
Maro saro fa tokony hihaino
Raha toa izy ireo tsy mandinika ianao dia tsy ho afaka hanatratra ny tanjona. Tia vazivazy dia lehibe plus raha fantatrao ny fomba mampiasa azy io. Miezaka ny hijery ny fifandraisana amin ny fanaovana vazivazy, satria ny ankamaroan’ny ny ry zalahy izay hoe, mitady ny Mampiaraka toerana saro-tahotra, ary angamba aza tsy ny olona. Mampiasa ny fahatsapana sy ny fahalalam-pomba, ary ny hafatra dia ny momba ny mety ho fandoavana ny saina sy ny ianao te-hihaona. Raha ny ankizivavy no te-hahita ny fifandraisana eo amin’ny toerana, azo inoana fa dia miasa mafy ary izy dia manana fotoana kely mba mandany fotoana miaraka amin’ny namana na mpiara-miasa aminy, dia tsy sarotra ny hizara aminareo ny momba ny asa sy ny asa. Raha mikatona ny momba ny asa, dia azo inoana fa izy dia ny toerana tena sy ny tovovavy fotsiny leo, miezaka ny ravoravo na ny ento an-tongotra. Aza misahirana ny zazavavy miaraka amin’ny hafatra ary tsy miandry ho azy izy raha ivelan’ny aterineto, miezaka ny maneho ny tenanao sahirana ary zara raha mandeha any ny namany sary. Tsy manoratra ny tovovavy be dia be, atao ny miato ka dia afaka mihevitra fa. Tsy misy ilaina mba lazao ahy izay ianao miandry izany ary dia tsy repeatable, milaza izay tianao ho mahita izany na aiza na aiza ary nahoana ianao eto ary mampiasa na Mampiaraka. Ny ankizivavy dia hahita anareo ho toy ny tanjona, ary ho azy ireo no tena zava-dehibe. Raha misy bandy te-hahita ny namany nandritra ny fotoana ela, tokony hieritreritra momba ny tenanao sy ny manomboka mba henoy ny toro-hevitra, tena azo inoana fa izy ireo no ho ny fahamarinana. Raha toa ianao ka mampiasa ny loharanon-karena tsotra fotsiny, ho vonona ho amin’ny zava-misy fa tsy mba hitsena anao angamba mety hoe tsotra ihany ny zazavavy. Mampiasa vola, ny mpampiasa tamin’ny izany dia foanana ary dia mety ho hita ao amin’ny fifandraisana mihitsy amin’ny fomba hafa. Mandoa ny saina ho ny toerana, ny sasany aza manoratra fa te-hahita ny lehilahy, ary te-hahita ny lehilahy ho namana. Angamba ankizivavy nanova ny sata, satria izaho no diso fanantenana, fa manana fahafahana mba hanaitra azy ary manomboka miaraka amin’ny namana. Aza maika ny hangataka ny isa an-tariby na mandamina ny fivoriana, afa-tsy toe-javatra miavaka. Ianao no mila manao tsara tarehy izy no nanome izany ho anao. Izy mety ho soso-kevitra, fa rehefa reraka izy dia. Miezaka ny milaza ny anarany, izany ankapobeny dia miasa foana amin’ny fomba tsara ny olona rehefa mandre ny anaranao. Mandoa ny saina ho an’ireo izay tsy tapaka ny aterineto. Angamba fotoana izao, fa mbola mendrika ny mieritreritra momba ny zavatra ataony vao nanam-potoana, ary raha toa ianao ka tsy tapaka mipetraka amin’ny Fiarahana eo amin’ny Aterineto, dia azo inoana fa ‘ilay Andriambavy, ary ny pea’ mety ho sarotra ny hahazo ny mandeha na mitaky be dia be ny fotoana hanaovana izany miaraka aminy.
Fahatsapana voalohany dia tsy nofoanana
Inona no mampiseho mihitsy teny am-piandohana, ary izany dia vokatry ny famitahana. Raha manao fahadisoana tany am-piandohana, dia ho sarotra ny hahazo ary ny safidy tsara indrindra ho an’ny fampandrosoana bebe kokoa, izany no jiro ny fifandraisana amin’ny hafa ny zazavavy. Fanamby ny fanontaniana mba hampitsiry tsara ny fahatsapana, tsy maintsy ho tianao ny hanoratra voalohany, noho izany dia afaka hanampy ho amin’izany amin’ny alalan’ny fanoratana ao amin’ny toerana izay te-hianatra sy vonona ny fifandraisana. Aza malahelo, dia mamaritra izay vonona ny hianatra, ary ho hitanao fa ny vavy, izay tianao ve ny hahazo eo amin’ny fifandraisana, ny hanoratra ianao dia tsy izy. Tantaram-pitiavana ho — fotoana izay dia hitsena izay te-hahita ny fanahy vadiny, ary dia ho hitanao ny fomba ny hafatra dia manomboka avy aminao ary hahomby ianao
← Breziliana anarana ho an'ny beginners
I brezila - ny vavahadin-tserasera Breziliana. News, forum, ny kolontsaina, ny fifindra-monina, raharaham-barotra, ny jeografia →